လစဉ်ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ် ၃ဝဝဝဝ ရရှိမည့် ချည်မျှင်နှင့် အထည်အလိပ် ကျွမ်းကျင်သူ သင်တန်းနှင့် လက်? - Yangon Media Group
ချည်မျှင်နှင့်အထည်အလိပ် ကျွမ်းကျင်သူတစ်နှစ်သင်တန်းကို အခြေခံပညာအလယ်တန်းအောင် မြင်ပြီးသူများနှင့် လက်ရက်ကန်း သင်တန်းကို အခြေခံပညာအလယ် တန်းအဆင့်အောင်မြင်ပြီးသူများ တက်ရောက်နိုင်ပြီး အသက်အား ဖြင့် အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၅ နှစ် အတွင်းရှိရမည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းတက်ရောက်မည့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအတွက် နေထိုင်စားသောက်ရေးကို သင်တန်းကျောင်းမှ စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရက်ကန်းပညာရပ်ကို အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက် လျှော့ပေါ့၍ လက်ခံပေးမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားလိုသူများသည် ရက်ကန်းနှင့်အသက်မွေးပညာသင် တန်းကျောင်း (ဘားအံမြို့) ဖုန်း ဝ၅၈-၂၁၆ဝ၇၊ ဝ၉ ၂၅၃၅၂၅၃၄၈ သို့ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နောက်ဆုံးထား ၍လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရ သည်။
''ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခွင့် ရပြီဆိုတော့ ပရိသတ်တွေဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း ဆုတွေလည်းရအောင် ကြိုးစ??